नेपाल आज | महेस बस्नेतले वाईसिएललाई ठेगान लगायौँ भन्नु हरुवा गोरुको छेरुवा दाउ होः तुफान (भिडियो सहित)
महेस बस्नेतले वाईसिएललाई ठेगान लगायौँ भन्नु हरुवा गोरुको छेरुवा दाउ होः तुफान (भिडियो सहित)
नेकपा माओवादी केन्द्रको भातृ संगठन वाईसिएल नेपालका केन्द्रिय सचीव दिल बहादुर थापा 'तुफान'ले युवा संघका अध्यक्ष महेस बस्नेतले वाइसिललाई दबायौँ भन्नु हरुवा गारुको छेरुवा दाउ जस्तै भएको प्रतिक्रिया दिएकाछन् । नेपाल आजसँगको संवादमा बोल्दै यस्तो प्रतिक्रिया दिएकाहुन् । उनि भन्छन्, 'महेस बस्नेत हिजो वाइसिएलको घेरामा पर्दै माफी माग्दै आएका व्यक्ति हुन् । तिनैले वाइसिएललाई दबायौँ भन्नु हरुवा गारुको छेरुवा दाउ जस्तै हो ।'
तुफानले वाईसिएललाई ठेगान लगाएको इतिहाँस आफ्नो अगाडि ल्याईदिन चुनौती दिएकाछन् । वाइसिएल नेपाल आवश्यक परे जती बेला जस्तो सुकै अवस्थामा पनि प्रकट हुन सक्ने भएकाले नजिस्किन समेत सचेत गराएकाछन् । उनि भन्छन्, 'वाइसिएल नेपाललाई ठेगान लगाएको इतिहाँस हाम्रो अगाडि ल्याउन चुनौती दिन चाहान्छु । महेस बस्नेतको संगठनसँग हामी जस्तो सुकै वहस गर्न तयार छौँ । चुनौती दिएको हो भने कहाँ आउनु पर्ने हो? कस्तो रुपमा प्रकट हुनुपर्ने हो हामी आउन तयार छौँ । राजासँग नडराउने वाईसिएल महेस बस्नेतहरुसँग डराउदैन ।'
महेश बस्नेतले नेतृत्वको गरेको युथ फोर्सको एजेण्डा के हो भनेर प्रश्न समेत गरेका छन् । उनि भन्छन्, 'युथ फोर्स भनेको को हो? उनिहरुको एजेण्डा के हो? के युथ फोर्स बाँदरसेनाको नेतृत्व गर्ने संगठन ह हो?'
वाइसिएलले जनयुद्धदेखि नै देश र जनताको आवश्यकता अनुसार काम गरेको उनि बताउँन् । वाईसिएलले विगतमा उठाएका एजेण्डामा देश चलेको नेता थापाको दाबी छ । उनि भन्छन्, 'हिजो देशको आवश्यकता अनुसार जनमुक्ति सेना भएर लड्यौ । एजेण्डाको हिसाब हेर्दा हाम्रो एजेण्डामा देश चलेको छ? वाईसिएल सिर्जनशिल तरिकाले देश र जनताको सेवाका लागि काम गरिरहेको छ ।'
दिल बहादुर थापा तुफान वाइसिएल महेस बस्नेत